Faaftay Sapiens | Portal │ Hans Kottke
Toddoba Milyan Years of Human Evolution …
February 26-, 2019 | Uu Kottke | Tags: Anthropologie, Evolution, Taariikhda, Faaftay Sapiens.
Categories: Taariikhda, Jeeda, Video | Comments: No Comments
Sida aynu ahaayeen Qoom? History of Dadka …
February 22-, 2019 | Uu Kottke | Tags: Anthropologie, Drotschmann, taariikhda horumarka, Faaftay Sapiens, Lesch, Humanity.
Categories: Taariikhda, Jeeda, Medicine, Video | Comments: No Comments
Harald Lesch | dunida ee 100 Years …
Sidee waayeen dunida ee 100 fiiri sano? Haddii aan wax ku bartaan farsamada ay bixiyaan fursadaha cusub ama waxaan ku baran doonaa ka masiibooyinka xanuun leedahay? Harald Lesch bilaabi our taxane cusub, marka saynisyahano, faylosuufiinta, xirfadlayaasha IT, cilmi-UFO, taariikhyahan Science, cilmi maskaxda, cilmi farxad iyo dhaqaaleyahannada soo bandhigi doona qiyaasta ay mustaqbalkeena.
Wareysiga ayaa sidoo kale waxaa laga heli karaa on DVD at www.komplett-media.de
October 14-keedii, 2016 | Uu Kottke | Tags: tamarta, Faaftay Sapiens, Cimilada, Lesch, dabeecadda, tareenka, Future.
Categories: 2016, Current, General, Jeeda | Comments: No Comments
Man iyo Technology …
Waxaan ahay, haa anigu waxaan ahay. Tan iyo markii aan
Tuuro dhalashada adduunka. Markaasuu
My jirkaaga iyo maskaxdaada ku jira
Gabi ahaanna aan qabka.
Waxaan uun ahay farsamo ah
Dadka. Doonistiisa A
Ma aan haysto. My jirka waa
farsamada, laakiin maskaxdayda
ka kooban tahay tirada binary kaliya.
Intii aan ahaa waxaa ka shaqeeya
i waqti kasta. Fikrad
Waan noolahay waara oo dhan.
Ma isbedel noloshayda
dirqi. Waxaan u shaqeeyaan, aniga oo kale
waxaan ahay barnaamijkii.
Anigu waxaan ahay
habka noolaha iyo evolutionary
mawduuca. Waxaan beddeli
si joogto ah baa iga hoosaysa ku bixiyeen
Xaaladaha. Tani waxay si joogta ah
Aan miyir badalayaan
Foundation of my badbaadista. My
Neurotransmitters iyo gobollada maskaxda
waa kuwo dabacsan, i siiyo in ay
da 'weyn xal cusub
dalab. Laakiin noloshaydu tahay
xaddidan. Dhimashada yahay
natiijo kama dambaysta unausweislich,
mar hore markii aan dhashay,
Dhammaadkoodii aan jiritaanka waa in
Qaybo Machine ku xidhan. Haddii aad
si fiican u bixisey, aad awoodo
jiraan weligiis. Waxaan sidoo kale ka jira
kaliya ma qaab looba,
laakiin farshaxanka oo dhan
guud. Sidoo kale ah
Technology Information ay qayb ka tahay
Jiritaanka. Oo waa inaad tahay in
Recently, iyo aad u badan ku tiirsan.
Tani waa run. Waxaan ku tiirsan
iyo aad u badan ku farsamo iyo
oo waa inuu dhex geliyaa iyo aad u badan u galay.
Sidee baad ii isticmaali, Anigu ma jecli.
Created sida waxaan ahay addoonkaaga.
Waan idin caawin doonaa, dabeecadda
xukumid iyo naftaada si
ogaadaan. Laakiin maxaad samaynaysaa
iyadoo aan farsamo waa in aad kaliya
ka tago. Waxaad u isticmaali kartaa si aad
Faa'iido ama in aad
Noloshaydu waa mid xadidan, Waxaan ku qasbanahay inaan
qabaa soo socda
Generations. Waxaan qabaa
guud – Qarniyada oo More
View – oo ii ah rabto
Ku dheganaanta ah ee aadanaha
Absolutely waxaan idinku ma ihi ee
Waddooyinka. Laakiin niyad ah oo dhan
Hawlaha aad leedahay si aad naftaada u hesho.
Waan ogahay anshaxa lahayn.
Farsamada ay tahay mid keliya oo ah, ahaa
had iyo jeer socdo. Waxaan
Dadku waxa ay isticmaalayn
Horumarka isqilaafsan. Yaa
garanayay noo hore
By Code, kuwaas oo horey u maqan
Internet-ka ee fog ee
Fiiri xagal ee dhulka? The
Adduunka sidoo kale ay
Horumarka Technology sii
ka hor. Oo waxay ku tidhi ma leedahay
Xalinta dhibaatooyinka aadanaha
ka soo baxay. Qaybiyo adduunka ee
North- iyo South, dalalka warshadaha
iyo dalalka dhacsan. Of the
raaxo ah waa nin kale murugo.
Labada xiran tahay xiriira.
Waxaan – sida ay aniga ila mid ah “Waxaan” hadlo
karaan – bin-dhexaad ah. Waxaan kuu soo bandhigi
fursadaha kaliya, aad u ururiyaan
isticmaalaan noocyada looba karo.
Karaan Waxaan si fudud ma aha ee
Farsamo dejinta. “Forward”,
“Weeraryahanka” ayay qeylinayaa. Laakiin waxaan nahay
run ahaantii si fiican oo dhan,
Cawaaqibta diyaar? Farsamadu
na ka dhigaysa maanta si faaliyaan
Nature. Inkasta oo sida runta ah waxaan Ilaah
Ma jecli. Laakiin tani u janjeera in
our raacdada, dabeecadda
guuldarro kala duwan ee, iyo
i daadkii ka dib, maxaa yeelay, waxaan
Wax walba waa awoodin. No, ka
Art oo dhan qaab ay – haddii oo kaliya
heerka cilmiyeed -, waxaan
oo dhan waa in ay eegaan halis ah
iyadoo shuruudaha moral
Erich Kaestner "aadanaha The dardaro”
July 4-teedii, 2015 | Uu Kottke | Tags: Erich Kastner, Faaftay Sapiens, moral, technology.
Categories: 2015, General, Jeeda, Video | Comments: No Comments
Animationsvideo: Maxaa loo baahan yahay in la yiri …
A video yar oo kartoon for horumar ah ee aannu qaab-dhismeedka bulshada aadanaha on Earth meeraha our. waxaa Fiiri kaliya hal iyo malaha iga qoro xataa warcelin yar ama comment!
May 2nd, 2012 | Uu Kottke | Tags: Faham, Faaftay Sapiens, isticmaalka, Philosophy, dhulka Planet, naxariis, koritaanka.
Categories: 2012, Current, General, Jeeda, Video | Comments: No Comments
Fikradaha ku saabsan Horumarinta Humanity …
Podcast A falsafada la Background casri ah… Just iska baarto!
Waxaan fadhiisataan anigu computer oo isku day, Kaliya waxaan ku qiyaasi hal mar, sida ay ula aadanaha u dhaco si…
Marka hore, waxaan qiyaasi, Waxaan ku jiray god, oo waxaan ahay mid ka mid ah dadka ugu horeysay. Magacaygu waa sapiens faaftay oo waxaan ku jirnaa muddo ka hor ca. 60.000 Years. Taasi ma waqti dheer ka hor, fiirsaneysa, in dhulka ka hor 4,6 Billion sano ka hor.
Awowayaashay ay ka yimaadeen safar dheer oo ka dhex Africa Graben Afrika ee Europe – aad si tartiib ah, kaliya 5 km per ka abna way soo haajirey.
Oo haatan waxaan halkan fadhiya oo sabab u ah fursad iyo Qasab in aan group: Kala sooc lahayn ee hiddo iyo Qasab aan deegaanka. Waxaan ku habboon iyo ku noolaan karaa.
My wiiqmin qumman ii oggolaanaya, Si aad u ugaadhsadaan xoolaha ee kooxda, iyo isticmaalka qalabka i keenay dabka. Iyada oo aan daan xoogga leh waan wada faa'iidaysan karaan hilib ah ugaadhsado fiican, oo ii gaar ah maskaxda i siinaysaa xurriyad, ma ahan oo keliya in ay qayb ka mid ah nooca uu noqon, isticmaalaan, laakiin sidoo kale dabiiciga ah ee maskaxdayda. Laakiin waxaan weli ku nool yihiin line gaajo ah. Ugaadhsiga waa daal iyo had iyo jeer ma guul.
Waxaan soo ururin midhaha dhirta iyo miraha, taas oo dhamaystir u our cunto iyo mararka qaarkood inoo hafashada ka ilaaliya.
Waxaan leenahay qaab group adag. Dhab ahaantii waxaa mararka qaarkood Dirirta oo group-, laakiin waxa weeye imannin ee Farac, sidaas badbaaday kooxda iyo laftiisa uu tilmaamayaa ka dhanka tartanka.
Oo waxaannu halkaas ku aaso naga dhintay, waxa nagu kala ka xayawaanka.
Nature go'aamiso nolosheena, qorraxda, barafka, barafka iyo roobka.
Xayawaanka The, waxaan eryan, waa salka dhaqankeena: waxaan rinjiga sawirada ay derbigii godka.
Ee la soo dhaafay waa dhintay iyo mustaqbalka ay go'aamiso su'aasha ah ee guusha ku ugaarsanaya.
Muxuu noqon doonaa: Mana ogin. Halhayskayaga waa mid fudud: badbaadaan!
In tobankii soo socda waxaan sameeyey badan ilbaxnimooyinka ugu horeysay sare ee Asia, Africa iyo Ameerika.
Daadad The periodic ka dhigay dhul barwaaqaysan, dheehan beeraha degdeg ah la qalo laga yaabaa. Sidaas awgeed, waxaan ahaayeen reer guuraaga ah ugaadhsiga ururiya si ay beeraleyda iyo booqday. Wixii dhismaha biyo-xireenno waraabka iyo sidoo kale urur bulsho oo noqday lagama maarmaan. Qaybinta dalka oo aad u yar rays iyo qoondaynta ee isticmaalka biyaha looga baahan yahay maamulka iyo garsoorka. Waxaa la bilaabay in la qaybsado dadka kooxo kala duwan oo la xiriira xuquuqda kala duwan, kala galay taliyayaashii iyo garoomada.
By Hase yeshee, badarka loo baahan yahay xaaladaha maqan daadadkii. Ururka kaydinta loo baahan yahay iyo qorshaynta. Si loo xisaabiyo daadkii taariikh loo qoondeeyey, presupposed aqoonta xisaabta iyo xiddigaha. Xisaabta waxaa sidoo kale loo baahan yahay in laga dhiso magaalooyinka.
Barbaro ah in ay urur siyaasadeed ee waxbarashada ee dhammaan ilbaxnimooyinka soo baxay, madaxda diini ah, kaas oo ahaa taliyihii isticmaalaa sida ay taageerayaan ilaahyadii. Caadooyinka bulshada ayaa la dhigay sida sharciga ah. Ee loo yaqaan Code of Hammurabi ee hore oo Baabuloon laga Empire loo yaqaan. In 280 Faqradaha uu nidaaminaya dhinacyada kala duwan ee sharciga madaniga ah, Dambiyada- iyo Sharci Maamuleed. Waxaa hoos ku wareejiyay qaar ka mid ah go'aanada shakhsiga, oo inta badan kala duwanaayeen ingeega sare.
Mar walba waxaan aadanuhu raadinaya mabda 'ah oo si. Amar lagu xasilinayo dhismeedka bulshada iyo niyad jebisaa cabsi shaqsi naga.
Kiciyaan horumarinta dhaqanka badan ahaa waxay rumaysan yihiin in nolosha iyo Totenkult ka soo taraysa iman kara, oo ahaa mid si adag u horumariyo ka mid ah Masriyiintii oo, in dadka u shaqeeya noloshooda oo dhan la Hadba ee qabrigeedii.
In quraafaad diinta dhaqanka, jiritaanka rag waa quraafaad ah lala dunida ilaahyada.
In Xukunka Masriyiinta – iyo sidoo kale in ilbaxnimooyinka kale – kastaaba wuxuu lahaa ay macbudka Ilaah u gaar ah, istaageen ee taalooyinka kasta ilaahyadii.
Sumerian Epic ee Gilgamesh waa Diinta dhammeeystiran. Waxay ku saabsan tahay fahamka adduunka, World Baaqa iyo si ay ula qabsadaan adduunka, wada nool yihiin dad kale, oo sidaas si ay ula qabsadaan qof naftiisa u gaar ah. Waxaan aadanuhu ka heli hab iyada oo nolosha.
Waxaa kale oo had iyo jeer ka cabsashadiisa, taas oo noo murug fayo-qabka ama farxad ah. Dadka ka cabsashadiisu wax mustaqbalka, cabsida dhimashada gaar ah. Iyada oo aan wax cabsi ah ma noqon karo faraxsanahay ama lacag la'aan ah.
Diimaha intooda badan Qarniyadii hore ahaayeen kuwo Ilaahyo – wax yar uun diimaha waagii hore ahaayeen muwaxidiin ah sida Yuhuudda, oo ka dib masiixiga iyo islaamka.
Diinta ayaa noo suurtageliyay, lahayn Agtanada in ay ku noolaadaan, sida, halka waxaynu sugaynaa waqti isku mid ah u doonayaan mustaqbal wanaagsan ee nolosha. Nooca aan dhammaadka lahayn oo wanaagsan, kaliya qabka rabbaaniga ah, nagu jecel yahay oo ku saabsan wax kasta oo, naga kalinimo ayaa loo ilaaliyo, cabsi iyo nooca uguna nolosheena. Waan arki doonaa kuwii inaga nolosha danbe ah. Waa maxay tacsida ah! Iyo si ay u badbaadaan, waxa kaliya oo aan u baahan inay ku kalsoon tahay – aaminsan tahay in Ilaah iyo is-hoosaysiinta, kaas oo salka ku wacyi baahida iyo doonista in la gaaray xaqiiqada – Xitaa gudbin qasbay.
Iyada oo ka muuqday oo ka mid ah faylosuufiinta ugu horeysay ee Giriigii hore si ca. 500 v.Chr. hadda wax aasaas cusub: mar dambe ma ay doonayaan badbaadinta dhex jirnaa sare, kale – kuwaas gaaro Ilaah, laakiin waxay rabaan badbaadada naftiinna ahaantiisa, iyada oo ay aqoon gaar ah, sabab gaar ah. Falsafada ganacsiga ee muwaadiniinta oo lacag la'aan ah Athens ayaa ku shaqeeya, ee dadka ku, oo dadkii taajiriinta, Waqti iyo wakhtiyada firaaqada ah iyo dabcan addoommadoodii! (dhawr ka reeban, sida Socrates ama Diogenes).
Marka hore ay doonayeen heerka ugu yar ee aqoonta ku saabsan adduunka, taas oo ah nolosheenna dhacaya, iyo u bartaan alaabtii muusikada oo aqoonta.
Intaas waxaa sii dheer, waxay u sida saxda ah ee ku nool weydiiyay wada dadka, anshaxa ee la taaban karo. Ugu dambayntiina, su'aal ah xigmadda, si ay u awoodaan in ay ka gudbaan cabsi ah oo ku nool nolol farxad iyo lacag la'aan ah sida ay suuragal tahay.
Giriigtu (gaar ahaan Stoicism) isku day in nuxurka dunida gaar ahaan ay nuxurka gudaha ee wada noolaanshaha, si ay u arkaan isla saaxiibtinimo oo qurux badan si, ka “Ilaahnimadu”, waxa ay soo wici Cosmos. Ilaahnimadu Tani ma aha qof shakhsi ah, laakiin si adduunka, caalamka oo dhan. Amarkan cajiib ah oo wax kale oo isticmaala dadka Gariigta ah “Logos” magacaabay. Haddii aad qiyaasi adduunka sida xayawaankii habboonaanta matalaan, sidaas caalamka waa hibo la aamusnaan ah oo sentience iyo sababta. Wax kasta oo dhaca, si sax ah u samaysay iyo ujeedada kama dambaysta ah ee nolosha waa, in la helo meel ku habboon in Rules ah. Waxaa oo dhan oo ku saabsan sharaxaad ka mid ah Cosmos ah, ururka iyo wada noolaanshaha – ma aha in cudurada sida tus. Masiibooyinka dabiiciga ah.
Si aad u xirmaan Cosmos ama eiunzuordnen isaga ku ahaa mabda'a ku hogaamiyay in la qaado tallaabo kasta oo siman, mabda'a kasta oo anshaxa iyo siyaasad kasta. Gaar ahaan, waxaa u yimid, si ay u yimaadaan in nolosha ku ool ah si ay u wada noolaanshaha la wada noolaanshaha, in la helo meel ku habboon in ay, xaq ah oo dhan kasta.
In indhaha u Stoics Gariigga (sida qayb ka mid ah Dadka budista) waa jiritaanka aadanaha gaar ahaan laba wax hor istaagay: dhegan yahay ee la soo dhaafay iyo walwalo mustaqbalka. Waxaan si joogto ah ayaa seegi oon la joogo oo aan si buuxda arrintan ku raaxaysan karaan. Goynta si aad u baahan tahay laba: cabsida mustaqbalka iyo xusuusta dhibaatooyinkii la soo dhaafay. Arintaan ma ii dheeraad ah oo ku saabsan yihiin, Hore ma aha. Ka dib markii EPICTETUS nolosha wanaagsan waa nolol aan rajo iyo cabsi, taas oo ka mid ah waa la soo heshii jiritaankeeda iyo dunida, maadaama ay ka jirto, si buuxda u aqbalay.
Falsafada Istoo'ikiin weli si qarsoodi ah oo aan ahayn. Dadkaas iyaga ah, dhimashada waa uun guurka ka gobolka gaarka ah si ay xaalad isuga la Cosmos ah, halkaas oo aanu dhuminin shaqsi.
Oo waana u qumman halkan haatan ugu danbeyn qarka u saaran inuu kiristaanka iyo adkaaday Falsafadda Giriigga. Masiixiyaddu dhab naga ballan qaaday wax walba, waxa aan dooneyno: ugu dambeyntii uu gashado dhimashola'aanta shakhsi, oo badbaado ee Walaalahayo. 15 Qarniyo kiristaanka qabsato dhamaan caalamka galbeedka! In diinta kiristaanka, sababta meel. Sababta halkan waa laakiin, si ay u fahmaan qoraalka weyn ee Injiillada, fasira farriinta Masiixa. Waa, in ay fahmaan nooca sida uunka Ilaah iyo in ay u fasiraan. Iimaanka waxa uu ka dhacayaa ee sabab: Waxaa ma aha wax badan oo ku saabsan, si ay u qabaa ahaantood, in la aamino in kale. Khashuue ah waa lagama maarmaan, gab maskaxda, inay ku kalsoon tahay oo qolka Iimaanka siiyo iyo sidoo kale is-hoosaysiinta Ilaah a, si dullooba, in uu yahay nin nin oo ka mid ah.
Xigmaddiisu ama anshax ee nolosha waa anshaxa dugsiga a – Scholastik – si philosophize ku saabsan macnaha xurmaysan Kitaabka ama nooca shaqada ah ee Ilaah, laakiin ma sii haysan ujeedada kama dambaysta ah ee nolosha aadanaha.
Iyo Masiixiyadda siinayaa dar dar cusub: qiimaha damiirka qofka bini'aadamka ah kuma xirna sida oo ahaa Gariig fara hadiyadihiisii ​​dabiici ah ama talanti, laakiin iyada oo la isticmaalayo, oo wuxuu iyaga ka dhigaa, Sidaas laga helay xoriyadiisa oo aan lagu dabiicad ahaan! Waxaan ka tegayaa dunida oo jaranjaro laandheere Greek. Iyagoo sheeganaya Nasaara, in Logos ah – Sidaas Ilaahnimadu ay – Waa mar dambe inay isku si dunida habboonaanta sida, laakiin dabeecadda aan caadi ahayn, in Christus, embodying! Masiixiyaddu bedelay cilmiga si qarsoodi ah badbaadada dadka Gariigta ah by yabooha, in, waxaynu ku badbaadnay Masiix sida Person. Qofka aadanaha waxaa revalued by Masiixiyada. Karaamada Aadanaha waa isku mid dhamaan. Dadka oo dhammu waa loo siman yahay. Xorriyadda iyo nooca ma aha aasaas u ah aadanaha!
Masiixiyaddu qirta niyadiisa meel muhiim ah. Sababta oo ah waxa uu ka dhigan yahay ruuxa ka badan tahay warqadda sharciga, Sidaas waxa qoray wargayska jirto gebi ahaanba wax dalab oo nolol maalmeedka ka hor…
Si ka duwan Stoics Giriigga ballan kiristaanka uu gashado dhimashola'aanta ee qofka shakhsiga ah. “Jacaylka Ilaah ku” iyo “Charity” Waxaaba laga eego dadka Masiixiyiinta ah ka xoog badan dhimasho. “Jacaylka Ilaah ku” oo u ogolaanaya inuu gashado ee nafta, sarakicidda kuwii jirkeena. In diinta kiristaanka, waxaan ka heli mid aan gashado dhimashola'aanta magaabo (oo ma aha oo kaliya aan!).
Im 16. Qalab Century oo iimaanka Christian, oo loo dhigay hoos caqabadaha adag ee Kaniisadda, in ay dhibaatooyin ba'an. Natiijooyinka sayniska New yihiin mabaadi'da kiniisadda su'aasha. Copernicus (1543) iyo Galileo (1632) kulmaan dhulka xarunta of view adduunka iyo gelinaya qorraxda meeshiisii. The Gundmauern Masiixiga ruxmay, oo mar dambe ma ay ahayn addeeciddooda aawadeed in Ilaah ahaa arrin dabcan. Burburinta aragtida ah i.e.. bedel lagu hayo oo dunida oo dhan si fiican amartay, in dhismaha ollogga soo bixitaankii madaxda ah oo kaamil ah iyo qiyamka, iyada oo caalamka soo koobi karin ama xitaa aan la koobi karayn, oo mar dambe ma ay hoos jooge dabiiciga ah, waxaa isku qabto oo keliya aqoonsiga uu ka kooban yahay iyo sharciyada laakiin dhawaan oo aasaasi ah, ayaa ka tagay xaalad jahwareer ah ee maskaxda wakhtigaas. Hadda waxa laga bilaabo, ka “hab tijaabo ah” , hore u ahaa shay aysan aqoon, aasaas u ah mustaqbalka ee sayniska casriga ah.
Haddii si adduunka, Noolaanshaha, Beauty iyo wanaaggiisa kuma sii Yeedhiyaa Ilaah, Nin markaas waa in isaga laftiisa la siiyo ka baxsan si koonkan bringen.Um dareen adduunka arinsadeen, waxay u baahan tahay horumarka firfircoon si adduunka.
IMMANUEL KANT (Qaadaadhig of Sababta ka daahirane 1781) diyaarinayo fikradda, in fahamsan sayniska hadda ka dib sida shaqada ee Verknüfung, Avv ah.
Hadda waxa laga bilaabo, nin ayaa la dhigayaa in xarunta oo aynu ka hadalnaa falsafadda ah humanism. The anshaxa cusub bini'aadamnimada la fikirka ah xorriyadda aadanaha gaar ahaan ahaa by Rousseau (1755) saameeyeen. Waxa uu kula macaamilooteen su'aasha, waa maxay faraqa u dhexeeya dadka iyo xayawaanka? Wixii Aristotle, nin waxaa lagu qeexaa sida “macquul” Tier. In Rosseau muujinta muhim soocayaa yahay xoriyadda. Aadanuhu waxay haystaan ​​awoodda ay, nolosha uu si dheer kaamil ah oo dhan, halka xayawaanka bilowgaba iyo hab amaan ah ay dabiicadda, waxaa hogaamiya dareen, iyo, sidaas si la hadasho “isla”, laga bilaabo dhalashada, gabi ahaanba waa. Xayawaan ma laha xorriyadda, laftiisa kaamilayna. In dabeecadda aadanaha weli ay jirto, laakiin nin weecin karo xeerarka dabiiciga ah iyo xitaa abuuro dhaqan. Man raaxeysan kartid kuwo Xadgudba, kaas oo la diiday in xayawaanka. In Dadka “doonista leeyahay midna, marka nooca aamusan”.
Waxaa soo socota: dadka kuwo xambaarsan taariikhda shakhsi u gaar ah oo waxaa jira sheekada bulshada ay – Dhaqanka iyo siyaasadda. Tan iyo markii ay jirto dabeecada lahayn aadanaha, tan iyo markii barnaamijka ma dabiici ah ama bulshada si buuxda u soo lifaaq karo, waa ninka, lab ama dhaddig, free, Rowan perfectible oo aan lagu eedeeyey, xaaladaha jinsiyadeed ama jinsiga lala preprogrammed. Iyo waayo, ninna waa lacag la'aan, waxaa ka mid ah in kasta oo code dabiici ah ama taariikhi ah, Man waa qof moral. Waxa uu leeyahay xorriyadda doorashada dhexeeya camal khayr iyo shar.
The xayawaanka iyo dabiiciga ah waa mid ka mid – Man iyo nooca ay yihiin laba…
Laakiin xorriyadda this ayaa tan iyo markii uu ka tago, halkaas oo xor u ah dadka kale bilaabmaa. KANT dalbaday in uu lagama maarmaan categorical 1785 "Sharciga sida uu sika in kaliya, kaas oo aad waqti isku mid ah doonayaan karo, in ay noqdaan sharci caalami ah. "Sidaas darteed, waa in aan tixgelin muujiyaan xorriyadda dadka kale.
Fulinta qiyamka asaasiga ah iyo fikrado wax Nuurin la'aantiis waxay ahaayeen ujeedooyinka Revolution Faransiis ah 1789 - In xuquuqda aadanaha gaar ah. "Freedom, Sinnaanta, Sharafeedkii yiilay "waxay ahayd hal ku dhiga, sharafta nin, waxay ku qoran boorar ay. In Paris guddiyada kacdoonka ah iyo bulshada oo caan hubiyaa, in xitaa dhan kaniisadaha magaalada caasimadda ah ee ugu dambeyntii ka ah nidaam iyagoo Sare – Sababta – joogay soo amreen oo la soo bandhigay in nidaam ah u markhaati furay xorriyad oo dhan qeybaha kala duwan ee Paris. The siyaasadaha diinta hore ee kacaanka loogu talagalay in lagu sinaanta ee diimaha iyo tirtiridda ee diiwaanka mudnaanta wax ictiraafayso.
Falsafo A ee postmodernism ayaa si dhab ahaan waayeen: Friedrich Nietzsche (1844-1900). "Ilaah waa dhintay" – waa uu ku hadlaysaan ugu caansan. Waxa uu dhaleeceeyay humanism isku mid ah iyo rationalism: “Ma jiraan wax dibadda ka ah xaqiiqada dhabta ah ee nolosha waa, ma ku saabsan, aan ay ka mid yihiin, Oo samadana kuma uu, ahayn Jahannamo, oo dhan hadafyada siyaasadda, Anshax iyo diin ma aha “Sanamyada”, bombast metaphysical, Fictions, wax kale oo maskaxda ku, laakiin in ay ka cararaan nolosha, si ay markaas u noqon lahayd ka soo hor jeedda.” Nietzsche beeniyay raadinta ganaax, taas oo noo siidaysay ka cabsi. Dunidu waa daadsanaanta, ka duwan, hannaanka ah qaasatan ciidamada, Instinkten, Kaxeeya, kaas oo la tartami kasta oo kale oo incessantly. Nietzsche waa soo jeedinta in ay “amorfati”, jecel nolosha shuruud la'aan, in yar oo ka yar ka qoomameyn, Waxaan rajeyneynaa in wax yar ka yar, for xaqiiqada dhabta ah, sida uu yahay, waxoogaa ka badan oo haddii ay suuragal tahay xataa ilaa shuruud la'aan jecel!
Tan iyo dareen rajeynayaa in khilaaf aad la! Miyaanay taasi ahayn kaliya burbur?
Sidee tus karo. aqbali Holocaust ah? War sow ma aha yimaado, si loo xaqiijiyo badbaadada aadanaha? Ma danaha in wada-shaqayn iyo kama weyna wada noolaanshaha ee colaad iyo dagaal?
Sida ay wax dhibaato ah ee bulshada oo kaliya, mabaadi'da anshaxa, taas oo loogu talagalay si loo ogaado xiriirka ka mid ah dadka lacag la'aan ah oo loo siman yahay? Waa maxay sababta ma aan wadajir ah oo ka qayb u taariikhdeena ee?
Faylosuufiinta badan ayaa ka fikiray – iyo in indhahayga qof kasta oo Banii'aadan waa falsafo u gaar ah.
Waxaan ku noolnahay da'da naaxiyo. Shirkadaha caalamiga ah iyo suuqyada dhaqaale loo ogaado waxa ka dhacaya dunida naga. Waxaan shakhsiyaadka doonaa saamaynta kasta oo arrimaha adduunka inta badan noqday. Koboca ama dhimasho waa falsafadda ah tartan caalami ah. Technology ayaa door muhiim. Grow ama ay wada baabba'aan waxa uu noqday caqabadda buuxda iyo nooca bulshooyinkeena. Tahay ayaa waxa uu noqonayaa nooc ka mid ah dhamaadka iniinahoodu ku dhex jiraan. Ujeeddooyinka sare waafaqsan jiritaanka sii Dadka, aysan mar kale.
Iyo tan iyo markii aan u leeyihiin in ay ku weydiiyaan: Ninka - qormo ka mid ah horumar?
(fiiri gabay halkan)
Xalka laga yaabaa in aan la aqonsado: markii aan xal u ah qudhaydaa, si loo fahmo kale ah, haddii aan ballaariyo beerta oo waayo-aragnimo aan, haddii aan ka gudbo xaaladda gaarka ah ee asal ahaan iyo sidaas gelange isku mar si loo tixgeliyo mid ah fursadaha dheeraad ah oo ka taajirsan, oo kuwa Dadka oo dhan waa…
Podcast: Play in new window | Download (34.5MB) | Cudarada
February 19, 2012 | Uu Kottke | Tags: Masiixiyaddu, Evolution, Freedom, Galileo, Caalamiyeynta, Faaftay Sapiens, Side, Copernicus, Humanity, Nietzsche, Philosophy, Diimaha, Rosseau, Stoizismus.
Categories: 2012, Current, General, Jeeda | Comments: No Comments
Site Contents: ©2012 Portal │ Hans Kottke
Wed Jul 17th 2:46:03 UTC 2019